भारतले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्यो : ओली – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/भारतले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्यो : ओली
मदन भण्डारी फाउण्डेसनले शनिबार बालुवाटार गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको हुन्छ, हप्ता १५ दिनमा प्रधानमन्त्री परिर्वतन हुँदैछ, भारतका मिडिया सुन्नु भएको होला । भारतका बौद्धिक बहसहरु सुन्नु भएको होला । कसरी भारतको राज्य संयन्त्र सक्रिय छ …।’
आफू अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरे लगतै हटाइएको उनले स्मरण गरे । अहिले नेपालले आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्दा फेरि आफूलाई हटाउन खोजिएको उनले बताए ।
उनले भने, नेपालकै नेताहरु लागेका छन् । बहस चलेको छ, अहिलेको अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन ।’
‘चीनतिर सम्झौता गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो किनभने हामीसँग बहुमत थिएन । अहिले त्यही सपना देखेर संविधान सशोधन भयो, नक्सा जरी भयो । बाहिर भन्न नसक्ने तरभित्रभित्र यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई …. दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरु सुन्नुस्, त्यसैले निदेश गरिहाल्ट कि हाँकहाँ केके भइरहेको छ ।’
यहाँका होटलहरु भइरहेका गतिविधिले पनि देखाइरहेको छ । दूताबासको सक्रियतादे पनि देखाउँछ ।’
तर नेपालको नक्सा छापे पावत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने सपना पुरा नहुने उनले बताए । नेपालको आजको रााष्ट्रियता यति कमजोर छैन, कसैले नसोचे पनि हुन्छ …’ उनले भने, ‘कसैले हतारो नगरे हुन्छ, कसैले विभिन्न आग्रह नपाले पनि हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पदमा बसिरहन मन नभएको बताए । तर यसतिबेला आफू हटे भोलिबाट नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले नगर्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘किनकी भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ । त्यसकारण मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि । आफ्ना लागि होइन, देशका लागि … ।’
आज अमेरिकासहित ८ देशका मुद्राको भाउ बढ्यो, कुन देशकाे कति ?
सुनसरीमा १२ बर्षिय बालकद्धारा आत्महत्या